Umklamo kanokusho Chalet e Grindelwald - I-Airbnb
Umklamo kanokusho Chalet e Grindelwald
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Francoise
I-chalet itholakala ngenhla kweGrindelwald enokubukwa okumangazayo phezu kwesigodi nezintaba ezizungezile, zonke ziyingxenye yesiza samagugu omhlaba se-UNESCO: izintaba i-Eiger, iMönch neJungfrau. I-chalet, efinyelelwe ekupheleni kuka-2014, ifakwe futhi yahlotshiswa ngokunakekela ukuze ukwazi nabangani bakho noma umndeni wakho ukuba nichithe iholidi ongenakulibaleka endaweni ewubukhazikhazi kodwa ethokomele. Imithambeka yokushibilika eqhweni ingamamitha angu-800 ukusuka endlini futhi ingafinyelelwa ngokushushuluza ngaphakathi nangaphandle ngabashushuluzi abaningi.
I-chalet yatholwa ngezinto ezinhle, izinkuni namatshe emvelo, ukuze kugcizelelwe ubuqiniso kanye nalesi simo esifudumele ikakhulukazi ezindlini zase-alpine. Ifenisha nokuhlobisa kukhethwe ngokukhathazeka kokudala ukulingana phakathi kwedizayini yesimanje evuna ukunethezeka kanye nobuhle kanye nezinto zendabuko ukuze kuhlonishwe amagugu amasiko aqondene nesifunda.
Indlu enkulu igcwele izitezi ezi-3 futhi ifaka ihholo lokungena elinendawo enkulu yokugcina, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye nekhishi elingemuva, igumbi le-TV kanye nendlu yangasese yezivakashi.
Esitezi sokuqala kunamagumbi okulala amathathu afinyelela kuvulandi omkhulu onamagumbi awo okugezela. Efulethini elingaphansi, okungenwa kuzo ngezitebhisi ezihlehlayo, kunegumbi lezingane ezinombono omuhle kakhulu edolobhaneni.
I-chalet ixhunywe umhubhe wangaphandle esibayeni sezimvu sangaphambili esalungiswa ngokuphelele ekupheleni kuka-2016. Nansi i-sauna, enombono wayo omangalisayo esigodini, igumbi lokugezela kanye negumbi lokulala elengeziwe elinesitofu sezinkuni. .
Ilonke lingamumatha abantu abayisi-8 nezingane ezi-2.
I-inthanethi itholakala endlini yonke. Ukushisa kwenziwa ngepompo yokushisa.
Kungakhathaliseki ukuthi umbhangqwana wothando, iholide lomndeni noma uhambo lwebhizinisi - i-alpine ambience, umklamo wangaphakathi osesitayeleni kanye nokunethezeka kwesimanje kuhlangene ukuze kwakhiwe indawo ekahle yanoma yiluphi uhlobo lweholide.
ubusuku obungu-7 e- Grindelwald
Le ndawo ingenye yezimangaliso zemvelo ezingavamile ze-Alps. Maphakathi nendawo kunenqwaba enamandla eyakhiwe i-Eiger, iMönch neJungfrau, kanye neqhwa elizungeze iGreat Glacier yase-Aletsch.
Ebusika, indawo yaseJungfrau ski enemithambeka engaphezu kuka-200 km ezindaweni ezi-3 ezixhumene ikuvumela ukuthi ujabulele indawo enhle kakhulu e-Alps eYurophu. Le ndawo ihlinzeka ngezindlela eziningi zokuhamba ezigcinwe kahle kanye nezihlibhisi kanye ne-sledge ende kunazo zonke egijima e-Europe: 15 km phakathi kweMount Faulhorn neGrindelwald! Uzothola ama-sledges onawo ku-chalet ...
Kukhona namathuba amaningi okushushuluza eqhweni nama-ice skaters.
Ehlobo, ukuvakasha okuningi kuzokuvumela ukuthi uthole isifunda noma ngabe uhamba ngezinyawo, ngebhayisikili noma nge-paragliding. Ungabuka iziqongo ezimbozwe yiqhwa, amachibi nobuso bamadwala azungeze iGrindelwald.
Labo abangadlali kangako bezemidlalo bangakwazi futhi ukuthola isifunda ngomqeqeshi, noma ngokuthatha isitimela sisuka eGrindelwald siya eWengen ngezintaba noma ngesikebhe esinqamula amachibi amakhulu azungezile.
Ngeke ungabaze ukuvala ukuhlala kwakho e-Grindelwald ngohambo oluya "Top of Europe" ozofika kuyo ngesitimela ukuze uthole i-glacier yase-Aletsch, enamakhilomitha angu-22 ubude kunawo wonke ezintabeni ze-Alps futhi ikusondeze eduze nalezi. iziqongo ezintathu zeMythical: Mönch, Eiger kanye neJungfrau efinyelela umvuthwandaba wayo ku-4158m.
Ngizokwamukela mathupha lapho ufika futhi ngizokusiza ukuthi ulungise imininingwane yokuhlala kwakho uma uthanda.
Nganoma yimiphi imibuzo ungangithola ocingweni kukho konke ukuhlala kwakho. Yonke incwajana emayelana nendawo izobe ikulindile ekotishi lapho ufika.
Nganoma yimiphi imibuzo ungangithola ocingweni kukho konke uk…